Oovimba baseCalifornia- Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Matshi 1, 2021 by UStacy Malkan
Incwadi entsha yoMlawuli woPhando wase-USRTK uCarey Gillam ikhutshiwe ngoku kwaye ifumana uphononongo oluqaqambileyo. Nantsi inkcazo emfutshane yencwadi evela kumpapashi Isiqithi seSiqithi:
U-Lee Johnson wayeyindoda enamaphupha alula. Eyona nto wayeyifuna yayingumsebenzi ozinzileyo kunye nekhaya elihle lenkosikazi nabantwana, into ebhetele kunobomi obunzima awayebazi bekhula. Khange ayicinge into yokuba angangumntu kumlo kaDavid-no-Goliyathi ngokuchasene nesinye sezigebenga ezinamandla zehlabathi. Kodwa ingozi yasemsebenzini yamshiya uLee efakwe kwimichiza enetyhefu kwaye ejongene nomhlaza obulalayo owabuguqula ubomi bakhe babuguqula. Kwi-2018, umhlaba ubukele njengoko uLee ebethathelwe phambili kwelona dabi lomthetho lihle kwimbali yamva nje.
Amaphepha eMonsanto libali langaphakathi likaLee Johnson elimangalela uMonsanto. KuLee, ityala yayilugqatso ngokuchasene nexesha, oogqirha bexela kwangaphambili ukuba ngekhe aphile ixesha elide ngokwaneleyo ukuba angathatha ubungqina. Kwicandelo le-eclectic labancinci, amagqwetha amele ukummela, ibingumbandela wokuzingca ngobungcali kunye nomngcipheko wobuntu, nezigidi zeedola zabo kunye negama labo elisebenze nzima emgceni.
Ngamandla okubalisa, Amaphepha eMonsanto ithatha abafundi emva komlo wedabi elinzima lezomthetho, ukubuyisa ikhethini kubuthathaka benkqubo yenkundla yaseMelika kunye nobude amagqwetha aya kuya kuwo ukulwa nokungalunganga kwezopolitiko kunye nokufumana ubulungisa kubathengi.
Bona ngakumbi malunga incwadi apha. Thenga incwadi nge Amazon, Barnes & Noble, umshicileli Isiqithi seSiqithi okanye abathengisi beencwadi abazimeleyo.
"Ibali elinamandla, libaliswa kakuhle, kunye nomsebenzi ophawulekayo wobuntatheli bophando. UCarey Gillam ubhale incwadi enyanzelisayo ukususela ekuqaleni ukuya esiphelweni, malunga nelinye lawona madabi asemthethweni abalulekileyo kweli xesha lethu. ” -U-Lukas Reiter, umvelisi olawulayo we-TV kunye nombhali we "Uluhlu oluMnyama," "Ukuziqhelanisa," kunye ne "Boston Legal"
“Amaphepha eMonsanto adibanisa inzululwazi nentlekele yabantu kwidrama yasenkundleni ngendlela kaJohn Grisham. Libali lokungaziphathi kakuhle kwezorhwebo kwinqanaba elikhulu-isityhilelo esothusayo sokubawa kwemveliso yamachiza, ukuzingca, kunye nokungakhathali kobomi babantu kunye nempilo yeplanethi yethu. Kufuneka ifundwe. ” -U-Philip J. Landrigan, MD, uMlawuli, iNkqubo yezeMpilo yoLuntu yeHlabathi kunye nokuQhelekileyo kokuLungileyo, kwiKholeji yaseBoston
"Intatheli yamagqala ophando uCarey Gillam uxelela ibali likaJohnson kwincwadi yakhe yamva nje," Amaphepha eMonsanto, "ingxelo ekhawulezayo, ebandakanyekayo yendlela iMonsanto kunye neBayer ithamsanqa elitshintshe kakhulu ngexesha elifutshane. Ngaphandle komcimbi oxandileyo - inzululwazi kunye neenkqubo zomthetho- "Amaphepha eMonsanto" kukufundwa okubambekayo okunika inkcazo ekulula ukuyilandela yendlela esi simangalo esenzeka ngayo, indlela abagwebi abasifikelela ngayo isigwebo sabo nokuba kutheni iBayer ibonakala ngathi, , ngoku ndiphakamisa iflegi emhlophe. ” - ISt. Louis Post-Dispatch
“Umbhali wakha ityala elikholisayo lokuba iMonsanto yayinomdla wokukhusela igama lenkomo yayo kunokuthobela ubungqina benzululwazi beempawu zayo eziyingozi. UGillam ulunge kakhulu ekunikezeleni ngemiba entsonkothileyo yabantu abasemthethweni, nto leyo yongeza ubuntununtunu bebali likaJohnson… Ukwehliswa okugunyazisiweyo kombutho ekubonakala ukuba awuyikhathalelanga impilo yoluntu. ” - Kirkus
“UGillam ubalisa ngomzuzu wokuthatha uxanduva kunye nequmrhu elikhulu elineemveliso ezithengiswa njengezikhuselekileyo ukusukela ngeminyaka yoo-1970. Njengoluvavanyo lwezinto ezigwenxa kwezorhwebo kunye nokuziphatha okusemthethweni kwiimeko zamatyala, incwadi kaGillam ichaza isidingo sokhuseleko lwabathengi nokhuseleko. ” Uluhlu lweencwadi
“Kufundwe kakuhle, ukujika iphepha. Ndandixheleke ngenkohliso, ukugqwethwa, kunye nokuswela isimilo kwenkampani. ” -U-Linda S. Birnbaum, owayenguMlawuli, iZiko leSizwe lezeNzululwazi ngezeMpilo kunye neNkqubo yeSizwe yeToxicology, kunye noMfundi wase Residence, kwiDuke University.
Incwadi enamandla ekhanyisa iMonsanto kunye nabanye ekungakhange kubanjwe ixesha elide kubo!
-UJohn Boyd Jr., uMseki kunye noMongameli, uMbutho weSizwe wamaFama abaMnyama
Intatheli yophando uCarey Gillam uchithe ngaphezulu kweminyaka engama-30 enika ingxelo kwimanyano yaseMelika, kubandakanya neminyaka eli-17 esebenzela iarhente yeendaba zamanye amazwe. Incwadi yakhe yango-2017 malunga neengozi zemichiza yokubulala izitshabalalisi, iWhitewash: Ibali loMbulali wokhula, umhlaza, kunye noRhwaphilizo lwezeNzululwazi, uphumelele i-2018 Rachel Carson Book Award kuMbutho Wezintatheli Zokusingqongileyo kwaye ubeyinxalenye yekharityhulamu kwizifundo zempilo zaseyunivesithi ezininzi. iinkqubo. UGillam kungoku nje nguMlawuli woPhando weqela labathengi elingenzi nzuzo e-US Ilungelo Lokwazi kwaye ubhala njengegalelo Guardian.
Ukutya kwengqondo, Pesticides ulimo, Bayer, California, umhlaza, UCarey Gillam, inkundla, isifo, indawo, EPA, zolimo, glyphosate, impilo, herbicides, magqwetha, IMonsanto, Amaphepha eMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, ababulali bokhula
I-inki ze-Bayer zijongana neenkampani ezintathu zomthetho we-Roundup zomthetho njengoko kuhlala kuqhubeka
ezaposwa ngomhla Septemba 15, 2020 by UCarey Gillam
I-Bayer AG ifikelele kwimigqaliselo yokugqibela kunye neefemu ezintathu zomthetho ezimele amawaka abamangali abathi babhencwa kwimichiza yokutshabalalisa ukhula esekwe eglosfosate esekwe eMonsanto yabangela ukuba bakhulise i-non-Hodgkin lymphoma.
Izivumelwano ezintsha zenziwe ngokusekwe eCalifornia IBaum Hedlund Aristei kunye neGoldman ifemu yomthetho; i UAndrus Wagstaff ifemi evela eColorado; kwaye i Iqela le-Moore Law waseKentucky. Iifemu nganye nganye ifake isaziso malunga nezivumelwano kunye neNkundla yeSithili sase-US kwiSithili esiseMantla eCalifornia ngoMvulo.
Izivumelwano ziza emva kwezityholo zeefemu zamagqwetha amathathu zokuba iBayer ibuyela umva ngokweemvumelwano esele zenziwe kwiinyanga ezidlulileyo. Amafemu axelele inkundla ngoMvulo ukuba ngoku umntu ngamnye "unesivumelwano esenziwe ngokupheleleyo nesibophelelayo sokuHanjiswa kweMasteranto neMonsanto."
Ngokukodwa, ukujongana kuphawula inyathelo elibalulekileyo ekuziseni ukuvalwa kwesigwebo seminyaka emihlanu ubudala ngoku esiba ngaphezulu kwama-100,000 amabango aziswe ngabantu abavela e-United States abasebenzisa i-Roundup kunye nezinye i-glyphosate-based herbicides ezenziwe nguMonsanto ngaphambi kokuba waba nomhlaza.
U-Bayer wayesongele ngokufaka i-bankruptcy ukuba akukho kufikelelwa kwilizwe lonke, ngokonxibelelwano oluvela kwiifemu zabamangali ukuya kubaxhasi bazo.
I-Bayer ibhengeze ngoJuni ukuba ifikelele kwi-10 yezigidi zeedola zokuhlala kunye neefemu zomthetho zase-US ukusombulula uninzi lwamabango omhlaza we-Roundup ayi-100,000. Kodwa ngelo xesha zimbini kuphela iifemu ezinkulu zomthetho kwityala elitshabalalisayo elinezivumelwano zokugqibela ezisayinwe kunye neBayer - iMiller Firm kunye neWeitz kunye neLuxenburg, ngokutsho kwemithombo ekufutshane nengxoxo. Inkampani yaseBaum, iAndrus Wagstaff kunye neyase Moore zazineememorandam zokuqonda kodwa ingezizo izivumelwano zokugqibela, itsho imithombo.
Iinzame zenkampani zokusombulula isimangalo ziye zacaciswa ngokuyinxalenye ngumceli mngeni wendlela yokuphelisa amabango anokuziswa kwikamva ngabantu abaphuhlisa umhlaza emva kokusebenzisa iyeza lenkampani. I-Bayer izamile ukufumana imvume yenkundla ngesicwangciso esiya kulibazisa ukufakwa kwamatyala amatsha omhlaza we-Roundup iminyaka emine, kwaye ngesekwe ngamalungu amahlanu "ipaneli yesayensi" yokufumanisa ukuba ngaba i-Roundup ingadala non-Hodgkin lymphoma, kwaye ukuba kunjalo , kweliphi inqanaba elisezantsi lokuvezwa. Ukuba iphaneli igqibe ekubeni akukho nxu lumano phakathi kwe-Roundup kunye ne-non-Hodgkin lymphoma emva koko amalungu eklasi aya kuthintelwa kwixesha elizayo.
UMgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria walikhaba icebo, ukuthumela iBayer emva kwibhodi yokudweba.
Bayer wayenayo utshilo uLwesine ukuba ibisenza inkqubela phambili kuphuhliso lwesicwangciso "esihlaziyiweyo" sokusombulula isimangalo esinokubakho seRoundup kwixa elizayo. Iinkcukacha zesicwangciso seklasi esihlaziyiweyo ziya kugqitywa kwezi veki zizayo, ngokukaBayer.
Abamangali abaliqela abakhange bonwabe yile ndawo yokuhlala, besithi abazukufumana mali ininzi ngaphandle kweminyaka yokunyanga umhlaza obiza kakhulu kunye neentlungu eziqhubekayo kunye nokubandezeleka. Ewe, uninzi lwabamangali sele lusweleke ngelixa lilinde isisombululo.
NgoSeptemba 9, amagqwetha kaMarie Bernice Dinner kunye nomyeni wakhe uBruce Dinner bafaka inkundla ukuba uMarie oneminyaka engama-73 ubudala wasweleka ngoJuni 2 kwi-non-Hodgkin lymphoma yena nomyeni wakhe batyholwa ukuba babangelwa kukuvezwa kwakhe ngababulali bokhula bakaMonsanto .
Amagqwetha kaBruce Dinner acele inkundla ukuba iwavumele ukuba enze izilungiso kwisikhalazo ngokuchasene neMonsanto ukongeza ibango lokufa ngokungekho mthethweni. Esi sibini sitshatile sineminyaka engama-53 kwaye sinabantwana ababini nabazukulwana abane.
“UMarie Bernice wayengumntu ongaqhelekanga. Ukusweleka kwakhe bekufanele ukuba kuthintelwe, ”litshilo igqwetha uBeth Klein, omele usapho.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, California, umhlaza, Chhabria, ukufa, ukutya, glyphosate, herbicides, IMonsanto, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, ukubulala ukhula